ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “မြန်မာပြည်ကို ချစ်သူများ”
တစ်ခရီးထဲ သွားနေသူများရဲ့.....
Pls let me know how i can contribute.
just reply in comments. thanks ko paw.
Anonymous... လှူချင်ရင် ကျနော့်အီးမေးလ်ဖြစ်တဲ့ kopaw07@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
(၁)ကျနော် လွှဲရမယ့် စင်္ကာပူဖက်မှ လိပ်စာနဲ့ နာမည်ကို ပြောပြမယ်။
(၂) ငွေကို လက်ခံရရှိတဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ စင်္ကာပူဖက်မှ ငွေကောက်ခံသူနဲ့ အိုးဝေစင်္ကာပူအဖွဲ့သားတွေထံ အီးမေးလ်ကတဆင့် လှူသူရဲ့ အီးမေးလ်ကို ဘီစီစီ မှာ ထားကာ Internet Banking ကတဆင့် လွှဲပြီးကြောင်း အထောက်အထားနဲ့တကွ အကြောင်းကြားစာပို့ပါမယ်။
ဒီဖက်က အဆင့်က အဲဒီမှာပဲ ရပ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းကို ဘယ်သူတာဝန်ခံပို့တယ်၊ ဘယ်သူ့ထံကိုပို့တယ်၊ ဘယ်နေ့ကပို့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို လျို့ဝှက်ထားပါတယ်။ အိုးဝေ(စင်္ကာပူ)အဖွဲ့သားတွေပဲ သိပါတယ်။
လက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေစာရင်းနဲ့ ပေးပို့တဲ့ စာရင်းကို အိုးဝေစင်္ကာပူမှာ စနစ်တကျ လစဉ်စာရင်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အပြင်ကို မဖွင့်လှစ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်သွားတဲ့ တချိန်မှာ အများပြည်သူ သိသာအောင် ထုတ်ဖော်ကြေငြာပါမယ်။
Management Style တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ Scrum မှာ ကြက်နဲ့ ၀က် ရှိတယ်တဲ့။ သူတို့တွေ စီးပွားရေး လုပ်ဖို့ တိုင်ပင်တော့ ကြက်က ၀က်ပေါင်ခြောက်ဆိုင်နဲ့ ကြက်ဥ (Ham & Egg) ဆိုင် ဖွင့်ကြမယ်တဲ့။ အဲဒီတော့ ၀က်က ဒီလိုဆိုရင်တော့ ငါက မကိုက်သေးပါဘူး။ ငါက တစ်ဘ၀လုံး ရင်းထားတဲ့ အချိန်မှာ ကြက်က အသာလေး ဥဥပြီး အကျိုးရတော့မယ်တဲ့။
အဲဒီအတိုင်းပဲ ပိုက်ဆံလှူတဲ့ သူတွေဟာ ကြက်တွေလိုပဲပေါ့။ မြန်မာပြည်က လှုပ်ရှားနေတဲ့ သူတွေက ၀က်တွေလို ဖြစ်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်တပ်တစ်အား ကူမှလည်း တစ်ယောက်တည်းထက်စာရင် အကျိုးရှိမှာပဲ။
အဲဒီသဘောပဲ ကိုအင်ဒီ... အခုတောင် ကျွဲကလီစာဟင်းလေးအလွမ်းပြေ ကြက်နဲ့ဝက် ကို ကျနော်သွားဖတ်လိုက်သေးတယ်။